आयरल्यान्ड छाडेर पात टिप्दै हिड्ने मिनाको कथा: नेपाली पातको डिजाइनमा युरोपको डलर फ’लाउँदै (भिडियो सहित)
Homeसमाचारआयरल्यान्ड छाडेर पात टिप्दै हिड्ने मिनाको कथा: नेपाली पातको डिजाइनमा युरोपको डलर फ’लाउँदै (भिडियो सहित)
March 9, 2021 admin समाचार 6255
एउटा भर्ख’रकी विदेश पढेर आएकी युवती, जो कैची र झोला बोकेर बन पाखा’मा पात खोज्न चहार्दै हिड्दा नेपाली समाजका लागि अ’चम्मको विषय त बन्ने नै भयो । तर यसरी बन पाखामा हिड्नु मिना गुरुङको रहर मात्र होइन भवि’ष्य हो अनि जिन्दगी पनि । आयरल्याण्डबाट फेसन डिजाइनिङ गरेर फ’र्केकी मिना हरेक पातमा नयाँ डिजाइन देख्छिन् अनि त्यही डिजा’इनलाई उतारेर विभिन्न पोशाकमा भर्छिन् ।
बोरा स्टुडियो नेपाल नामक कम्प’नीबाट अघि बढेका उनको डिजाइनमा बनेका पो’शकको माग अहिले स्वदेशमा मात्रा होइन विदेशमा झनै बढी छ । नेपालमै बसेर हरियो पातमा डलर फला’उन सफल मिना गुरुङ कसरी यो यात्रामा जोडिइन् त ? – ओएस नेपालबाट
हेर्नुहोस् यो कुराकानी भिडियो मार्फत्…
यो पनि पढ्नुहोस्- कोरोना सङ्क्र’मणका कारण गत वर्ष गर्न नसकिएको राष्ट्रिय गैँडा गणना यस वर्ष चैत ९ गतेदेखि थालिने भएको छ । देश’भरका चारवटा निकुञ्जमा गैँडा छन् । चितवन र प’र्सामा एकै साथ गैँडा गणना गरिँदै छ भने बर्दिया र शुक्लामा फरक फरक स’मयमा गणना थालिनेछ । कोरोना सङ्क्र’मणका कारण गत वर्ष गर्न नसकिएको राष्ट्रिय गैँडा गणना यस वर्ष चैत ९ गतेदेखि थालिने भएको छ । देशभरका चारवटा निकुञ्जमा गैँडा छन् । चितवन र पर्सामा एकै साथ गैँडा ग”णना गरिँदै छ भने बर्दिया र शुक्लामा फरक फरक समयमा गणना थालिनेछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य’जन्तु संरक्षण विभागले पहिलो चरणमा चितवन ब्लक’अन्तर्गत राखिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रतापपुरबाट गणना शुरु गर्न लागेको हो । विभागका सूचना अधिकारी पर्यावरणविद् हरिभद्र आचार्यका अनुसार चितवन र प’र्सासँगै गणना गरिने छ । यसै बीचमा चैत १७ गतेदेखि बर्दियामा र १९ गतेदेखि शुक्लाफाँटामा गणना शुरु गर्ने उहाँले जा’नकारी दिनुभयो ।
आचा’र्यका अनुसार चैत २९ गतेसम्ममा चारै निकुञ्जमा गणना सकेर वैशाख पहिलो साता नतिजा सार्व’जनिक गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । गत वर्ष चैत ११ गतेबाट गैँडा गणना गर्ने भनिए पनि कोरोना सङ्क्र’मणका कारण अन्तिम तयारी भएपछि स्थगन भएको थियो । गणना गर्नुअघि चैत ५ देखि ७ गतेसम्म गणक, माउ’तेलगायत कर्मचारीलाई तालीम दिइँदै छ ।
गण’नामा दुई सयबढी कर्मचारी परिचालन हुने छन् जसमध्ये १५० हाराहारी चितवन ब्लकमा परि’चालन हुनेछन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा निकुञ्जलाई चितवन ब्लकमा राखिएको छ । यस क्षेत्रमा गणनामा ४० हात्ती परिचालन गरिनेछ । बर्दिया र शुक्लाफाँटामा भने सात÷आठवटा हात्ती परि’चालन गरे पुग्नेछ । दुई वर्षअघि गैँडा गणना गर्न लागिएको भए पनि तत्कालीन समयमा दाताको भर पर्दा बजेट अ’भावमा गणना हुन सकेको थिएन ।
सरकारले गत वर्ष गैँडा ग’णनाका लागि रु एक करोड १० लाख विनि’योजन गरेको थियो । आचार्यका अनुसार गत वर्ष केही सामग्री खरीद भएकाले यस वर्ष सरकारले रु ८० लाख विनियोजन गरेको छ । दाताहरुबाट रु २५ लाख हाराहारी सहयोग हुने उहाँले जा’नकारी दिनुभयो ।
१८ जना विद्यार्थी पढाउन १३ जना शिक्षक, हे’र्नुहोस् सरकारी स्कुलको हरिविजोग (भिडियो सहित)
आज मिति २०७७ फाल्गुन २६ गते बुधबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
हे दैव ! हाम्रो आमा ब’चाइदिनु भन्दै यी साना बाबुहरू, हस्पिटलमा यति धेरै पैसा ति’र्न बाँकी (हे’र्नुहोस् भिडियो )
April 13, 2021 admin समाचार 5742
२५ बर्षको क’लिलो उमेरमा दुई बतच्चाको आमा यसरी हस्पिटलको बेडमा लम्पसार परेर थन्किनुपरेको छ । नत हात चल्छ नत खुट्टा’नै अझ भनौ शरिरको कुनै पनि अ’ङ्ग नै चल्दैन् । भरखरै २५ बर्ष लागेकि अन्जना थापा
गायक एवं भ्वाइस अफ नेपालका निर्णायक दीप श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण, अस्पताल भर्ना
May 28, 2021 admin समाचार 6428
गायक एवं भ्वाइस अफ नेपालका निर्णायक दीप श्रेष्ठलाई कोरोनाभाइरस संक्र’मण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्यमा सम’स्या देखिएपछि उनलाई अहिले ह्याम्स अस्पतालको आइसीयू’मा भर्ना गरिएको भ्वाइस अफ नेपालले जनाएको छ । अन्य सहभागिलाई पनि कोरोना देखि’एपछि
आहा ! भगवान जस्ता श्रीमानले यसरी गरे अनितासँग फोटोसुट (हेर्नुहोस् भिडियो)
July 15, 2021 admin समाचार 10284
अनिता खडका र विनोद खडका यो जोडीलाई न’चिन्ने सायदै कम होलान् ।यो जोडी नेपालकै एउटा नमूना जो’डीको रुपमा चिनिएको छ । टि`कटकबाट भा’इरल भएको यो जोडीको वास्तविकता निकै नै मा,’र्मिक र आत्मि’यताले भरिएको छ ।
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242050)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229950)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229580)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228456)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227957)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227411)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226744)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226325)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (196983)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194345)